ဟဲရာခလီးဇ် - ဝီကီပီးဒီးယား
လူသားနှင့် အားကစားရုံကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူ
ဟဲရာကလီးဇ်နှင့်ပတ်သက်၍ အကျော်ကြားဆုံး ဖော်ကျူးမှုတစ်ခု၊ ရောမစကျင်ကျောက်ရုပ်တု၊ (အေဒီ ၂၁၆) အီတလီနိုင်ငံ၊ နေးပယ်လ်ဇ်မြို့ရှိ ရှေးဟောင်းသုတေသန အမျိုးသားပြတိုက်။
ဂရိနိုင်ငံ၊ ဖိုးစစ်ဒေသ၊ အိတာတောင်
ဇုစ် နှင့် အာလ်မီးနီး
အီးယကပ်စ်၊ အန်းဂဲလော့စ်၊ အဲဖရာဒိုက်တီ၊ အပေါလို၊ အဲရီးဇ်၊ အားတစ်မစ်၊ အင်နိုင်းယို၊ အဲရစ်၊ အားဆာ၊ အသီးနာ၊ အစ်လစ်သိုင်းယာ၊ ဟီးဘီး၊ ထရွိုင်မှ ဟဲလင်၊ ဟစ်ဖီးစတပ်စ်၊ ဟားမီးဇ်၊ မိုင်းနော့စ်၊ ပန်ဒိုင်းယာ၊ ပါဆက်ဖန်နီ၊ ပါးဆီးယပ်စ်၊ ရာဒါမန်သပ်စ်၊ ဂရေးဆစ်၊ ဟောရီး၊ လိုက်တီး၊ မြူးဇစ်၊ မွိုင်ရီး
မီးဂရာ၊ အောမ်ဖာလီ၊ ဒေးယာနိုင်းရာ၊ ဟီးဘီး
အလက်ဆီးယားရီ နှင့် အာနီကီးတပ်စ်၊ တဲလီဖာ့စ်၊ ဟစ်လာ့စ်၊ လစ်ပေါလစ်မာ့စ်
ဟဲရာကလီးဇ် (အင်္ဂလိပ်: Heracles; ဂရိ: Ἡρακλῆς, Hēraklês, "ဟဲရာ"၏ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားမှု/ဂုဏ်ကျက်သရေ) သည် ဂရိဒဏ္ဍာရီလာ စွမ်းအားထက်မြက်သော သူရဲကောင်းတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ငယ်နာမည်ကို မူကွဲနှစ်ခုဖြင့် ဖော်ပြကြရာ ပထမတစ်ခုမှာ အာလ်ဆီးယပ်စ် (သို့) အာလ်ကိုင်းယပ်စ် (အင်္ဂလိပ်: Alcaeus; Ἀλκαῖος, Alkaios) ဖြစ်၍ ဒုတိယအမည် မူကွဲမှာ အာလ်ဆိုက်ဒီးဇ် (အင်္ဂလိပ်: Alcides; Ἀλκείδης, Alkeidēs) ဖြစ်သည်။ ဇုစ်နှင့် အာလ်မီးနီး တို့၏ သားဖြစ်ကာ အမ်ဖစ်ထရီယန် ၏ မွေးစားသားလည်း ဖြစ်ပေသည်။ ဟဲရာကလီးဇ်သည် ပါးဆီးယပ်စ်၏ သားမြေးမျိုးဆက်တစ်ဦးဖြစ်ကာ ဖအေတူ မအေကွဲ ညီအကိုတစ်ဦးလည်း တော်စပ်သည်။ တော်စပ်ပုံမှာ နှစ်ဦးစလုံး၏ ဖခင်မှာ ဇုစ်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်၏ ။ ဂရိသူရဲကောင်းများအနက် အကြီးကျယ်ဆုံး သူဖြစ်၍ ကျားသဘာဝနှင့် ပတ်သက်၍ စံတင်လောက်သူဖြစ်သည်။ ဟဲရာကလိုင်းဒီးဟု သမုတ်ကြသော တော်ဝင်မျိုးနွယ်တို့၏ ဘိုးဘေးတစ်ဦးနှင့် အိုလံပတ်တောင်အဖွဲ့မှ (ခ)သောနစ် မိစ္ဆာများကို ဖြိုခွင်းသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပေသည်။ ရောမ၊ ခေတ်သစ်အနောက်ကမ္ဘာတွင် ဟာကျူလီ (ဟားကယူလီဇ်) အဖြစ် သိရှိကြသည်။ ၎င်းကို ရောမဧကရာဇ်များ၊ အထူးသဖြင့် ကောမာဒပ်စ် နှင့် မက်ဆီမီယန်တို့က ၎င်းတို့ကိုယ် ၎င်းတို့ ဟာကျူလီအဖြစ် ဖော်ပြကြသည်။ ရောမသားတို့သည် ဟဲရာကလီးဇ်၏ ဘဝနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များပါရှိသော မူကို မူရင်းအတိုင်း လက်ခံယူကြသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် ပုံပြင်ဆန်သော ဖြစ်ရပ်အသေးစိတ်လေးများကို ပေါင်းထည့်ရာ အချို့အချက်များမှာ မြေထဲပင်လယ်အလယ်ပိုင်းဒေသနှင့် ဆက်စပ်ပေးသည့် အနေအထားဖြင့် ပေါင်းထည့်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအား ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုသည့် အသေးစိတ်အချက်များကိုလည်း ရောမတွင် အလိုက်သင့်ပြောင်း၍ ကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်။
↑ Schmitz၊ Leonhard (1867)။ "Alceides"။ in William Smith (lexicographer) (ed.)။ Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology။ 1။ Boston: Little, Brown and Company။ p. 98။ 2008-05-27 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Bibliotheca (Pseudo-Apollodorus)' ii. 4. § 12
↑ By his adoptive descent through Amphitryon, Heracles receives the epithet Alcides, as "of the line of Alcaeus (mythology)", father of Amphitryon. Amphitryon's own, mortal son was Iphicles.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟဲရာခလီးဇ်&oldid=744213" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ မေ ၂၀၂၂၊ ၀၈:၅၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။